दलान नेपाल : जब महन्थ ठाकुरको हाथमा कमल थापाको चार बुदे पर्यो । कसरी र किन गए मोर्चाका शिर्ष नेताहरु दिल्ली ?
जब महन्थ ठाकुरको हाथमा कमल थापाको चार बुदे पर्यो । कसरी र किन गए मोर्चाका शिर्ष नेताहरु दिल्ली ?
दलानलाइ प्राप्त परराष्टमन्त्री कमल थापाका सहयोगीले तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरलाई बुझाएको चार बुदे प्रस्ताव ।
गएको शुक्रवार एका बिहानै परराष्टमन्त्री कमल थापाको एक जना सहयोगीले तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटेर एउटा सदा पानामा चार ओटा बुदाहरु उल्लेख गरेको कागज थमाउन पुगे । एउटा सादा पानामा कसैको नत नाम थियो नत हस्ताक्षर । ठाकुरको हाथमा कागज थमाएर थापाका सहयोगी त्याहा वाट निस्कने वितिकै ठाकुरको मोबाईलमा परराष्टमन्त्रीको फोन पनि आयो । पराराष्टमन्त्री थापाले ठाकुरलाई भने, तपाई काहा पुर्याएको चार बुदे भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी ओली तथा मेरो विचमा भएको सहमती छ । आज वेलुकी निर्णयक वार्ता गरौ र जारी आन्दोलन टुगाएर मिलौ अव । ठाकुर अक्नवक्क भए । ठाकुरले थापालाई केहि भनेनन । ठाकुरले त्यो चार बुदा पढे । त्यस पछि उनी मोर्चाका चारै अध्यक्षहरुलाई फोन गरे । मोर्चाको शिर्ष तहमा खैल्लावैला नै मच्चियो ।
के थियो त्यो चार बुदाहरु ?
मोर्चा उच्च स्रोतले दलानलाई उपल्ब्ध गराएको परराष्टमन्त्री कमल थापाको सहयोगी द्धारा तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरलाई पठाएको चार वुदे पत्रमा संघियताको सिमांकनको विवादलाई हल गर्ने संवैद्यानिक वा राजनितीक समिती वनाएर तीन महिना भित्र टुग्याउने प्रस्ताव थियो , त्यस पछि समावेशी समानुपातिक, तेस्रो जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र चौथौ नागरिकताको सवालमा संविद्यान संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
चार बुदे पाए पछि के भयो मोर्चा भित्र ?
परराष्टमन्त्री कमल थापाले भारतीय विदेश मन्त्रीको हवाला दिदै चार बुदे लिखित कागज तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर समकक्ष पुगे पछि ठाकुरले मोर्चाका सवै अध्यक्षहरु संग फोनमा कुराकानी गरे । सवैको एउटै कुरा आयो संघियतामा कसरी हुन्छ त ? अनि अब के गर्ने त । चारै नेताहरुको निष्कर्ष रहयो सरकारी पक्ष भारतीय पक्षहरु संग कुरा मिलाएर अघि वढयो । हामी पनि भारतीय संग कुरा गरौ न त ? सर्लाहीमा रहेका सदभावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतो र तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र यादवले सिधा दिल्ली सम्पर्क गरे । यता काठमाडौमा रहेका तमलोपा अध्यक्ष ठाकुर र फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले काठमाडौ स्थित भारतीय राजदुत संग समय मागे । भारतीय राजदुतले जती वेला आउदा पनि हुन्छ भनेर समय दिए । तमलोपा अध्यक्ष ठाकुरले फोनमै भारतीय राजदुत संग थापाको चार वुदे वारेमा कुराकानी गरे र दिल्ली संग आफुहरु कुरा गर्न खोजेको भन्दै समय मिलाई दिन भने ।
यता प्रधानमन्त्रीले विहान १० बज्दै पुरै उत्साहका साथ आफनो टिवटरवाट आज वेलुकि ५ बजे निर्णयक वार्ता हुदै छ भने टिवट गरे । मोर्चा भित्र ठुलो खैलवैला नै मच्चिरहेको वेला प्रधानमन्त्रीको त्यो सुचना वाट मोर्चा थप चिढिएका थिए । त्यही भएर उनीहरु त्यही समयमा भारतीय राजदुत संग भेटने निधो गरे । दिउसो सिंहदरवारमा भेला भएर मोर्चाका शिर्ष नेताहरुको एउटै निष्कर्ष थियो, पहिला भारत संग कुरा गरौ ।
यसरी ५ वजे प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरुको बैठक वालुवाटारमा जली रहदा त्याहा वाट निर्णयक भनिएको वार्ताका लागी आउने फोन माथी फोन आइरहेको थियो । तर फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भने, जो संग पहिला तपाई सम्झौ गरेर यो सहमती वुदाहरु तयार पार्नु भएको त्यो संग त कुरा गर्न दिनु ? त्यस पछि मात्रै वालुवाटारमा प्रमुख दलका शिर्ष नेताहरु आज वार्ता हुदैन भनेर हिडेका थिए ।
यता मोर्चाका शिर्ष नेताहरु सिंहदरवार वाट सिधा लौनचौर स्थित भारतीय राजदुतलाई भेटन गए । भारतीय राजदुतलाई चारै शिर्ष नेताहरु थापाको पत्र वारे जिज्ञासा राख्दा भारतीय राजदुत रन्जित रे त्यस वारेमा जवाफ दिएका थिए । भारतीय राजदुत रे ले सरकारी पक्ष अर्थात प्रधानमन्त्री ओली, पराराष्ट मन्त्री थापा र भारतीय विदेश मन्त्री विच साच्चिकै त्यो चार बुदामा कुरा भएको बताए । तर रे मधेशी नेताहरु थप पनि प्रष्ट पारे, हामीले प्रधानमन्त्री ओली र पराराष्टमन्त्री थापालाई प्रष्ट भनेका छौ कि मधेशी मोर्चालाई सहमत गराउनुस । यसमा हामी केहि गर्दनौ । त्यस अघि विहानै नै ठाकुर र यादवले दिल्ली संग समय मिलाई दिन भनेकोमा राजदुत रे ले साकारात्मक रुपमा त्यसलाई लिदै सरकारी पक्ष जस्तै तपाई पनि दिल्ली गएर कुरा गर्दा राम्रौ नै हुने भन्दै दिल्लीको समय मिलाई दिएको सन्देश सुनाए । उता सर्लाही वाटै सदभावना अध्यक्ष महतो र महेन्द्र यादव दिल्ली तिर लाग्न थालेका थिए ।
मोर्चा नेताहरु भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज संग
त्यस पछि आइतवार दिल्ली जानु अघि भारतीय राजदुत रे शनिवार दिउसो प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटन पुगे । रे काग्रेस सभापति सुशिल कोईराला र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि त्यही दिन भेटे । शुक्रवारको प्रधानमन्त्री संग वार्तामा नबसेको मोर्चाका शिर्ष नेताहरु शनिवार वेलुकि बस्न राजी भए । तर दिल्ली जाने निश्च्ति भईसकेकाले त्यो दिन उनीहरु कुनै कुरा गर्ने मुडमा थिएन । त्यही भएर शनिवारको औपचारिक वार्तामा प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलहरु विच बनेको साझा अवधारणा वारे मोर्चालाई अवगत गराएका थिए । प्रमुख दलहरुले शुक्रवार ३ बुदे साझा अवधारणा अघि सारेका थिए । स्रोतका अनुसार भारतीय विदेश मन्त्री स्वराज, नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र पराराष्ट मन्त्री थापा विच बनेको चार बुदा उल्लेख गरिएको नागरिकताको प्रावधानलाई त्यस वाट झिकिएको थियो । दिल्ली स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजलाई आफैले फोन गरेर नागरिकको सवालमा नेपाल भित्रै पनि विभिन्न दृष्टिकोणहरु रहेको र खास गरी मधेश क्षेत्रमा वारी पारी हुने विवाहको क्रमम आउने हरुका लागी नागरिकताको समस्या आफुले हुन नदिने वचन दिएका थिए । भारतीय विदेशमन्त्री स्वराज आन्तरिक रुप्मा त्यसलाई कुनै न कुनै ढंगले व्यवस्थापन गर्दा आफुहरुको तर्फ वाट केहि समस्या नहुने बताएका थिए । त्यस पछि ओली प्रमुख दलहरुको वैठकवाट नागरिकता वाहेक अन्य तीन ओटा बुदाहरु लाई सहमतीको खाकाको रुपमा अघि ल्याएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले शनिवार रातीको बैठकमा मोर्चा उक्त तीन वुदे प्रस्तावको वारेमा जानकारी गराएका थिए । त्यस पछि मोर्चाका नेताहरु आफुहरु उधारोमा नमान्ने भन्दै त्याहावाट निस्केका थिए ।
त्यस पछि आइतवार विहानै दिल्ली गए पछि मोर्चाका शिर्ष नेताहरु विभिन्न राजनितीक तहको भेटघाटमा सहभागी छन । दिल्लीस्रोतका अनुसार हिजो आइतवार राती भारतीय विदेशमन्त्री सष्मा स्वराज संगमो मोर्चाको बैठक यही मा केन्द्रित थियो । स्वराज संग डिनर बैठक गरेका मोर्चा शिर्ष नेताहरु झण्डै १ घण्टा जती एक्लै पनि कुराकानी गरेका थिए ।
दिल्ली स्रोत भन्छन, दिल्ली यो मौकालाई समाधानको उपयुक्त वाटो ठानेका छन । हेरौ के हुन्छ । दिल्ली चाडै नै सहमती बन्दान भन्नेमा ढुक्क भए जस्तै ठान्नुस । यदी हुन सकेन भने के स्थिती वडा नराम्रो हुने छन ।
स्रोतका अनुसार नाका अवरोधमा दिल्ली मुछिएकाले र यसको भारतमै एउटै तप्कावाट विरोध हुन थाले पछि भारतीय संस्थापन पक्ष असहजतामा फसेको महसुुस गर्छन । तर दिल्ली स्रोत भन्छन, यसको अर्थ हामीले मधेशको राजनितीक निकास होस भन्ने नै चाहेका छौ ।
कतिपय भित्रियाहरुका अनुसार थापाको चार वुदे प्रस्तावमा मोर्चाको केहि सरोकारहरुलाई थप प्रष्टाउदै निकाशको अन्तिम तयारी भईरहेको छ । जसको साक्षीमा दिल्ली बस्दै छन । स्रोतका अनुसार संघियताको सन्दर्भमा वनाउने भनिएको आयोगमा सवै प्रमुख पार्टीहरुको अध्यक्षहरु हुने र त्यसको सन्दर्भमा अहिले नै सहमतीमा तराई मधेशमा दुई प्रदेश हुने उल्लेख गराउने छ तथा उक्त आयोग संवैद्याँनिक हुने छ, जसले तीन महिना भित्र काम गरेर लागु हुने छ । तथा मोर्चा अन्य प्रमुख सरोृकारको सन्दर्भमा प्रमुख दलहरुले अघि सारेको तीन वुदालाई अली भाषागत रुपमा परिमार्जन गर्दै सहमतीको प्रयास भईरहेको छ । यता आन्दोलनरत मोर्चाले आफनो आन्दोलनको स्वरुप फेर्दै आमसभा लगायतका विभिन्न विरोध कार्यक्रमहरु भने तीन महिना सम्म जारी नै राख्ने छन ।
यसरी खोजीदै छन मधेश आन्दोलनको व्यवस्थापन सुत्र । http://www.dalannepal.com/2015/11/blog-post540.html